jeudi, 22 août 2019 13:38
Vohémar - Ampanefena: Vao maika mirongatra ny varomaizina amin’ny solika
Vetivety dia ritra ny solika eny amin’ny toby mpaninjara. Any amin’ny varomaizina no hita ny solika. « Ireo varotra amin'ny bidon mavo no mandany solika amin’ny station aty », hoy ny mpanjifa. 5000 Ariary ny litatra ho an’ny lasantsy eny amin’ny varomaizina. Tsy azo antoka anefa satria misy manafangaro rano na zavatra hafa ny solika eny amin’ny sisiny, ka maro ny motera simba aterak’izany. (Jereo Sary Tohiny)
mercredi, 21 août 2019 20:07
CDA Andohatapenaka: Namarana ny taom-pianarana
Nofaranana androany ny taom-pianarana teny amin'ny kolejy CDA Andohatapenaka. Nisy ny lanonana nentina namaranana izany, teo ambany fiahian'ireo mpanabe sy ireo raiamandreny. Ity kolejy ity moa dia mitaiza sy mampianatra ireo ankizy sahirana, ka ao anatin'izany ny kamboty izay tsy mahefa ny saram-pianarana ka anisan'ny manamora izany ny CDA. Mpianatra miisa manodidina eo amin'ny 280 eo no mianatra ao ankehitriny. (Jereo sary Tohiny)
lundi, 19 août 2019 21:07
Fitsaram-bahoaka: Mandrefy ny fahefam-panjakana ny zava-niseho tao Tsarabaria - Vohémar
Nandriaka ny ra androany alatsinainy 19 aogositra 2019 tao Antanamandriry Kaominina Tsarabaria, Distrikan’i Vohémar. Enin-dahy voalaza fa jiolahy mpangalatra lavanila no maty tsy tra-drano niharan’ny fitsaram-bahoaka. Niteraka resabe ny fahitana ny faty niampatra ka niparitaka tamin’ny tambazotran-tserasera sosialy ny sary. Aiza ny fahefam-panjakana, hoy ny maro ? Aiza ny mpitandro ny filaminana no dia novonoina tsy nandalo Fitsarana ireto jiolahy ireo, ka tsy ahafantarana ny atidohan’ny mpangalatra lavanila hoy indray ny sasany. Efa leo ny Fokonolona satria matetika dia votsotra hatrany ireo jiolahy tratra ka atolotra ny fitsarana, avy eo miverina mamalifaty ka ny fitsaram-bahoaka no vahaolana sady fiarovantenan’ny tantsaha, hoy indray ny hafa. Nahatrarana fitaovam-piadiana toy ny basy poleta roa, iray tena izy, ny iray vita gasy, niaraka tamin’ny bala miampy zava-maranitra sy fanafody fampatoriana tao anaty boaty tany amin’ireo jiolahy ireo.
lundi, 19 août 2019 21:03
Polisim-pirenena: Mametraka ireo paik'ady hanataterahina ny asa
Androany 19 aogositra 2019 no notontosaina tetsy amin’ny CCI Ivato ny lanonana fanokafana « Journée de concertation des grands responsables de la Police Nationale », izay fivoriana mandritra ny roa andro; natao hamolavolan’ireo lehibe tompon’andraikitra isan-tsokajiny eto anivon’ny Polisim-pirenena ireo paik’ady sy fomba fiasa vaovao entina hanatsarana ny fomba fiasa sy ahafahana manatanteraka ireo vina sy tanjona izay napetrak’Atoa Ministra ao anatin’ny « Contrat de performance » nifanaovany tamin’Atoa Praiminisitra lehiben’ny governemanta, ary tafiditra ao anatin’ny politika ankapoben’ny filohan’ny Repoblika. Tonga nanome voninahitra izany fihaonam-be arahina atrik’asa sy fikaonan-doha mandritra ny roa andro izany moa ny Praiministra lehiben’ny governemanta, Atoa Ntsay Christian.
lundi, 19 août 2019 15:52
Razanamahasoa Christine: Nampahatsiahy fa nampanantenain'ny fanjakana ny hampandroso an’Ambatofinandrahana
Tonga nisaotra ny Vahoaka nifidy azy sy ny rehetra amin’ireo Kaominina sivy mandrafitra ny Distrikan’Ambatofinandrahana ny filohan’ny Antenimieram-pirenena, sady solombavambahoaka voafidy taty Ambatofinandrahana, Razanamahasoa Christine, ny sabotsy 17 aogositra 2019. Natao tao Ampanaovampoara, kianja malalaka aty an-toerana ny lanonana. Tonga nanotrona azy ny mpikambana avy amin'ny governemanta, solombavambahoaka avy amin'ny Distrika maro, indrindra fa ireo zanaky ny Faritra Amoron'i Mania.
dimanche, 18 août 2019 18:01
Toeram-pamonjana: Fonja maromaro no hatsangana manomboka amin’ity taona 2019 ity
Misy amin’ireo toeram-pamonjana ireo no tsotra, toy ny hatsangana any Sambava sy Fianarantsoa, ary misy kosa ireo matevim-piambenana ho an’ireo nahavita heloka bevava mamoafady, hatsangana ao Imerintsiatosika (Antananarivo) sy any Ikelivondraka (Ihosy). Hohavaozina sy hitarina ny fonjan’i Tsiafahy sy ny any Moramanga. Hisy, amin’ny taona 2020, ny fanamboarana fonja tsotra any Manjakandriana, Vohémar ary ao Antananarivo Avaradrano. Hovatsiana fitaovam-piadiana vaovao ireo mpandraharahan’ny fonja ary hampiana ireo fiara fitondrana voafonja, mialohan’ny faran’ny taona 2019. Harahi-maso amin’ny alalan’ny «caméra de surveillance» ny fonjan’Antanimora, ny fonjan’i Toamasina, ary ny Fitsarana ambaratonga voalohany any amin’ireo toerana ireo.
dimanche, 18 août 2019 17:56
Tafika an-dranomasina: Hanorenana Tobim-pamaharana vaovao ao Tolagnaro
Hisy fanorenana Tobim-pamaharana vaovao an’ny Tafika an-dranomasina ao Taolagnaro. Hisy ihany koa ny fanamboarana ivon-toeram-pampianarana manokana miisa roa (2) ho an’ny Tafika andranomasina, dia ao Antsiranana sy Mahajanga. Hanomboka amin’ity taona 2019 ity, hoy ny Praiminisitra Ntsay Christian, ary ho tohizana izany amin’ny taona ho avy sy ny manaraka.
dimanche, 18 août 2019 17:28
Taratasin’ny omby: Hitovy ny sarany manerana an’i Madagasikara
Hivoaka alohan’ny faran’ny volana Oktobra 2019 ho avy izao ny rijan-teny hametrahana ny vidin’ny FIB (Fiche Individuelle des Bovidés) sy ny Bokin’ny omby, ho sarany iray mitovy manerana an’i Madagasikara. Izany no hatao, hoy ny Praiminisitra Ntsay Christian, dia mba hiadiana amin’ny kolikoly amin’ny fomba maharitra izay mianjady indrindra indrindra amin’ireo tantsaha sy mpiompy any ambanivohitra rehetra any.
dimanche, 18 août 2019 17:03
Zandarimariam-pirenena: Bakalorea no mari-pahaizana takiana amin'ny fifaninanana hidirana ho zandary manomboka izao
Nandritra ny lanonana famoahana ireo Zandary Mpiana-draharaha miisa 1195 avy ao amin'ny andiany faha-74 tao amin’ny Sekolin’ny Zandarimariam-pirenena Ambositra, ny famindram-pibaikoana teo amin'ny Vondron-tobim-pileovana Amoron'i Mania sy fankasitrahana ireo Zandary maherifo, no nanambaran'ny Sekreteram-panjakana miadidy ny Zandarimaria, Jeneray Ravalomanana Richard, tamin’ny antso finday, fa mari-pahaizana bakalorea no takiana amin'ireo zatovo hifaninana amin'ny andiany faha-75 izay hatao tsy ho ela. Hisy fandraisana Zandary vaovao miisa roanjato sy arivo (1200) ny amin’ity taona 2019 ity. (Jereo Sary Tohiny)
dimanche, 18 août 2019 14:20
Toamasina: Lasan’ireo mpanampy vavy tao an-trano ny vola 7 tapitrisa Ariary
Tonga nitaraina tao amin'ny Commissariat Mangarano – Toamasina ny fianakaviana iray ny 13 aogositra 2019, nilaza ny fahaverezan'ny vola 7 tapitrisa Ariary. Nanao fikarohana avy hatrany ny Polisy, nisy ihany koa ny loharanom-baovao avy amin’ny tsara sitrapo nahatsapana ny fihetsik'ireto mpanampy roa vavy miasa ao amin’ilay fianakaviana nitaraina ho very vola. Niaiky izy roa vavy fa nangalarin'izy ireo ny vola, ary nitantara ny fomba nakany ny vola. Napetrak'izy ireo tany amin'ny sipany ny vola, ary mbola nisy tratra tao ny ankamaroan'ireo vola ireo. Ny sasany tamin'ireo vola dia efa nividianana finday ho an'ireo akaiky azy. Natolotra ny Fampanoavana izy ireo, ary voatana am-ponja vonjimaika.